Ry havana malala, mbola ao anatin'ny fibanjinana ny loha-hevitra hoe "Mandray ny famonjena ny mino" isika amin'ity alahady ity. Ny Alahady anio dia alahady manaraka ny Trinité sy Alahady natokana hahatsiarovana ireo Maritiora. Koa ny hafatra izay toriana amintsika dia miompana amin'ny Isaia 61:10-11, izay maneho ny fahatanterahana ny famonjena izay nampanantenain'Andriamanitra ny vahoakany tany amin'ny fahababoana. Inona ary no hafatra ho antsika anio?
I. NY FAMONJENA ATOLOTR'ANDRIAMANITRA DIA MITONDRA FIFALIANA HO AN(NY VAHOAKAN'ANDRIAMANITRA
Milaza izany ny voalazan'ny Soratra Masina manao hoe "Hifaly dia hifaly amin'i Jehovah aho, ny fanahiko hiravoravo amin'Andriamanitra" (Isa 61:10a). Izany hoe miteraja fifaliana lalina eo amin'ny olona ny fandraisana ny famonjena atolotr'Andriamanitra. Izany famonjena izany dia asehony amin'ny fampitafiana famonjena sy fahamarinana ny olony. Ny famonjena eto, ho an'ny vahoaka Israely, araka ny bokin'Isaia, dia ny fahatanterahana ny Teny fampanantenana nataon'Andriamanitra sy ny teny fanomezan-toky momba ny fanafahana tamin'ny fahababoana izay nangeja azy ireo.
Maneho izany fa ny olona mahazo famonjena sy mahatsapa ny fanafahana nataon'Andriamanitra taminy, dia tokony hidera an'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Izany fifaliana izany dia tena avy any anaty mihitsy endrika ivelany fotsiny. Taratra teo amin'ny fiainan'ireo Maritiora malagasy ihany koa iizany fifaliana izany hiram-piderana nataon'izy ireo satria azony antoka ny famonjeny. Fa raha hiakatra Amboropotsy Rasalama maritiora, dia nihira izy.
Aza hadinoina anefa, ry havana, fa olona hoentina holefonina izy tamin'izay fotoana izay.
Ho anao ihany koa, efa vitan'Andriamanitra tao amin'i Jesoa Kristy ny famonjena izay lamba andrakofany antsika, fa anjaranao ny mandray izany mba hanananao fiainam-pifaliana ihany koa. Na dia eo aza ny adim-piainana samihafa lalovanao, azonao atao ny hanana fifaliana, raisinao ny famonjena atolotr'Andriamanitra anao amin'i Jesoa.
Tsy izany ihany anefa ry havana fa izao koa :
II. NY FAMONJENA ATOLOTR'ANDRIAMANITRA DIA MITERAKA VOA EO AMIN'NY VAHOAKAN'ANDRIAMANITRA
Milaza izany ny and 11 hoe "Fa tahaka ny tany mampitsimoka izay ao aminy, ary tahaka ny tanimboly mampaniry izay nafafy tao aminy, dia toy izany ny hampisehoan'i Jehovah Tompo fahamarinana sy fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra." (Isaia 6:11). Izany tokoa ry havana; ny famonjena raisin'ny mino dia hita taratra zo amin'ny fiainany fa tsy milevina fotsiny ao anatiny. Manamafy izany ny filazana hoe: mampitsimoka sy mampaniry . Maneho izany fa mitondra ny olona ho amin'ny fijoroana ho vavolombelona izany. Fa ny dikan'ny hoe "Maritiora" dia vavolombelona. Izy ireo dia nahajoro ary sahy niavaka tamin'ny fomban-tsampy tamin'ny andro fahavelomany.
Ho anao ihany koa: raiso ny famonjena atolotr'Andriamanitra mba hamoazanao ihany koa, ary "aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika" (2 Timoty 1.8). Ataovy hitan'ny olona fa misy vokany ny maha-mpivavaka anao. Ataovy hitan'ny manodidina anao fa misy vikany eo amin'ny toetranao sy ny fomba fitondrantenanao ny maha-kristiana anao.
Nandalo Alahady fahatsiarovana ny Maritiora isika androany, ry havana. Koa tsarovy fa ny olona nandray ny famonjena ihany no afaka miaina amin'ny fifaliana sy mamoa eo amin'ny fiainana ho vononahitr'Andriamanitra. Efa nadray ny famonjena natolony ve ianao? Tsy afaka ny ho maritiora ianao raha tsy manana valiny mazava ny amin'izany. Ho an'Andriamanitra irery anie ny vononahitra. Amen!